सङ्कलन मशरूम, तपाईं आफ्नो विषाक्त गुण सजग हुन र लक्षण केही भेद गर्न आवश्यक छ। च्याउ विषाक्तता को विभिन्न प्रकारका अधिकांश अक्सर अल्पकालीन र अचानक अपच मा नै प्रकट। तर यस्तो अपेक्षाकृत प्रकाश क्षणमा संग, घटनाको राम्रो गंभीर परिणाम, समाप्त ज्ञात अप मृत्यु गर्न।
क्रममा विष र समान ekstsesov को फसल तपाईं प्रजाति अज्ञात मशरूम गर्न पकाउने नियम पालन र गम्भीर बच्न छैन। विषालु मशरूम, लक्षण विषाक्तता अक्सर रूसी वन फेला समान भएका, त्यसैले कहिल्यै दुख्छ कि नशा प्रक्रियाको कसरी आगम बारेमा जानकारी।
एउटा राम्रो संकेत लक्षण को शीघ्र उत्पादन इन्जेशन पछि देखाउनुभएको छ। यदि च्याउ विषाक्तता Gag प्रक्रिया सँगसँगै छ, विष अनजानमा अपनाए व्यक्तिको आधारभूत खुराक बाहिर शरीर देखि, एक तीब्र रिकभरी योगदान आउँछ। भने, विपरीत मा, विष एक समय पछि देखिन्छ, त्यसपछि उहाँले रगत मा गहिरो पर्याप्त penetrated। समसामयिक र योग्य चिकित्सा हेरविचार को अभाव मा विपत्तिजनक परिणाम को धेरै उच्च सम्भावना छ।
विभिन्न लक्षण। गंभीर परिणाम संग च्याउ विषाक्तता।
Fungi को उच्चतम जोखिम पनि हुन् , फिक्का toadstool च्याउ सेतो smelly, र बस सेतो agaric उड। फिक्का toadstool अक्सर संग भ्रमित खाद्य मशरूम, यस्तो मशरूम, russula, greenfinch रूपमा। एक च्याउ खाएको पछि मान्छे धेरै गाह्रो छ बचत गर्नुहोस्। पनि सबैभन्दा आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रयोग गरेर डाक्टर तिनीहरूले गर्न मद्दत गर्नेछ ग्यारेन्टी दिन छैन। यी मशरूम को खतरा विषाक्तता को पहिलो संकेत को प्रकटीकरण तुरुन्तै उत्पन्न गर्दैन छ। विलम्बता अवधि छ 20 खाद्य इन्जेशन पछि घण्टा हो।
मशरूम यी तीन प्रकारका विषालु पदार्थ एक भन्दा बढी प्रकार, र तुरुन्तै दस विभिन्न समावेश गर्दछ। उल्टी, ऐंठन, पानी जस्तो पखाला - यी पहिलो लक्षण हो। यस प्रकारको को च्याउ विषाक्तता circulatory समस्या provokes। सबैभन्दा खतरनाक काल्पनिक सुधार र मानव अवस्थाको normalization तर। दोस्रो चरण निम्न जुन बेलामा अन्तस्करणले को हृदय को मांसपेशी, कलेजो, र scrapping को विनाश कारण, सबै भन्दा गंभीर र खतरनाक बिष सञ्चालन गर्न सुरु, ठाउँ लिन्छ। यस्तो विषाक्तता अक्सर घातक छ।
त्यहाँ अन्य तरिकामा अभिनय फरक लक्षण परिणामस्वरूप, मशरूम पनि छन्। यो असम्भव हुन लाग्यो थियो लामो समय को लागि यस प्रकारको च्याउ विषाक्तता। पातलो Svinushki, सेतो ढुसी उच्च क्रम यसको स्वाद गुणहरू लागि, लामो खाएको छ, तर तयारी मात्र अवस्था लामो गर्मी उपचार भएको थियो। मिति, हामीले पहिले नै यो प्रजाति विषालु, र विषाक्तता को एक उच्च सम्भावना को उचित र दीर्घकालीन गर्मी उपचार पछि हो कि साबित गरेको छ। यो च्याउ पारंपरिक अर्थमा कुनै विष समावेश गर्छ, तर त्यहाँ अझै पनि जो मानिसहरूलाई मा एंटीबडी को गठन प्रचार अपर्याप्त अध्ययन पदार्थ हो। यी एंटीबडी नयाँ अंश svinushki रूपमा जम्मा। तिनीहरूले विस्तार र हेमोग्लोबिन तिनीहरूलाई ल्याउन, रातो रक्त असर गर्छ। एक परिणाम रूपमा पीलिया या रक्तअल्पता विकास।
Fungi द्वारा विषाक्तता को मामला मा के गर्न? यो पेट र कसरी सकेसम्म डाक्टर गर्न सिकार प्राप्त गर्न बाहिर धुन गर्न आवश्यक छ। यसलाई सिकार विष जो च्याउ नै एक नमूना छ मनमोहक छ। यो डाक्टर सही उपचार को विधि निर्धारण गर्न सक्ने सुनिश्चित छ। कुनै मामला मा कुरा आफ्नो मार्ग गरौं र प्रतीक्षा सम्म सबै आफैमा जान्छ हुँदैन।
को टखने क्षेत्रमा सुन्निएको खुट्टा। सुन्निएको गोलीगाँठो: के?
मुख मा ठेउला: उपचार गर्न के र कसरी
छोराछोरीको मस्तिष्क Microcephaly: लक्षण। Microcephaly - एक ...
के: बेचैन खुट्टा सिंड्रोम को उपचार
सानो ट्युमर Rathke गरेको थैली: को कारण र उपचार
फ्रान्सेली चुम्बन के हो?
विभिन्न तरिकामा मिमोसा star name आकर्षित गर्न सिक्न
फ्रान्सेली केक नुस्खा: चिकन र मशरूम संग Quiche। चिकन र मशरूम संग quiche कसरी खाना पकाउनु?